Amamethrikhi Wokuguqula Ukubhuloga Kwebhizinisi | Martech Zone
Baningi emhlabeni wezokuxhumana ngaphandle lapho abahlulela impumelelo yebhulogi ngamamethrikhi wokuzibandakanya njengamazwana. Angazi. Akukho kuhlangana phakathi kwempumelelo yale bhulogi nenombolo yamazwana akuyo. Ngiyakholelwa ukuthi ukuphawula kungathinta ibhulogi - kepha ngoba akuyona into ongayilawula ngqo angiyinaki.
Ukube bengifuna ukuphawula, bengizobhala izihloko zezindaba zokuxhumanisa, okuqukethwe okungqubuzanayo nokuthunyelwe kwebhulogi okushubile. Lokhu, nakho, kuzolahlekelwa yizithameli zami eziyinhloko futhi kukhombe abantu abangalungile.
Amamethrikhi amathathu wokuguqula amabhulogi ebhizinisi ngiwanaka:
Ukuguqulwa Kwemiphumela Yenjini Yokusesha - Ochwepheshe abaningi bagxila kungakanani ithrafikhi oyitholile oyitholile… kepha hhayi ukuthi ulahlekelwe yimalini. Uma ubhala izihloko zokuthunyelwe okuyisicaba futhi imininingwane yakho ye-meta ayiphoqi, ungenza phezulu kwamazinga ezinjini zosesho kepha abantu kungenzeka bangachofozi isixhumanisi sakho. Bhala izihloko zokuthunyelwe eziguqula ithrafikhi futhi uqinisekise ukuthi izincazelo zakho ze-meta zigcwele amagama asemqoka nesizathu esihle sokuchofoza! Sebenzisa I-Google Search Console ukuze ihlaziye le miphumela.
Shayela Ukuguqulwa Kwesenzo - Izivakashi zokuqala zihlala kubhulogi yakho futhi ziyashiya noma zifuna ukwenza ibhizinisi nawe. Ngabe unikeza indlela yokuthi bahlanganyele nenkampani yakho? Ingabe unayo ifomu lokuxhumana elivelele nesixhumanisi? Ingabe ikheli lakho nenombolo yakho yocingo kukhonjwe ngokucacile? Ingabe unezingcingo eziphoqayo izivakashi ezichofoza kuzo?
Ukufika Kwekhasi Ukufika - Ngemuva kokuthi izivakashi zakho zichofoze ku-Call To Action yakho, ngabe zifika ekhasini elibenza ziguqulwe? Ingabe i-likhasi lokuhlanza lihlanzekile futhi lingenakho ukuzulazula okungadingekile, izixhumanisi nokunye okuqukethwe lokho akuhambisi ukuthengiswa?
Amathemba akho kufanele aguqulwe esinyathelweni ngasinye sendlela ukuze uzithole njengekhasimende. Kumele uhehe ukuchofoza kwabo ekhasini lemiphumela yenjini yokusesha (i-SERP), kufanele ubanikeze okuqukethwe okufanele ukuze bakuthembe futhi ubaphoqe ukuthi bambe ngokujula, kufanele ubanikeze indlela yokuzibandakanya - njengokubizela esenzweni esiphoqayo (CTA) futhi kufanele ubanikeze izindlela zokuxhumana nawe - njengekhasi elihlelwe kahle, elenzelwe ukufika.
Ukuhlanganiswa Yenza kulezi Zenzo ezihamba phambili!
Okokuqala: Umphumela wenjini yokusesha ye- Ibala ukubhuloga kwebhizinisi nge-ROI, I-Compendium inendawo yesibili futhi ibhalwe kahle - nakanjani ukuheha ithrafikhi ethile!
Qaphela: Uzoqaphela ukuthi i-Compendium inomphumela wesibili wosesho hhayi umphumela wokuqala. Uma isihloko sekhasi sine-Compendium Blogware ekugcineni kwesihloko kunasekuqaleni, usuku nemininingwane yomlobi kwehlisiwe, futhi incazelo ye-meta yayinolimi olucindezelayo, bangahle bakwazi ukukhipha umphumela wesikhundla esiphezulu. (Kuhle ukuthi incazelo ye-meta iqale ngegama elingukhiye, noma kunjalo!) Lezi zinguquko zingaphindeka kabili noma ziphindwe kathathu ukuguqulwa kusuka kuleli khasi lemiphumela yenjini yokusesha.
Okwesibili: Okuthunyelwe okuhle okufushane okuqondisa ukunaka okubili izinsiza ezengeziwe ukubala i-Return On Investment. Lokhu okuthunyelwe okuqinile, okufanele, noma kunjalo!
Qaphela: Enye indlela yokwenza ngcono lokhu kungenzeka kube ukuhlinzeka ngemithombo yesithathu - indlela ye- okwangempela shayela isenzo ku-ROI Toolkit.
Okwesithathu: Ukubizelwa esenzweni kuhle impela futhi kufanelekile kwikhophi esekhasini, futhi kuyindlela ecacile yokuthola imininingwane eyengeziwe!
Okwesine: Ikhasi lokufika alinasici ngokuphelele - linikeza okuqukethwe okusekelayo, okuphoqelelayo, ifomu elifushane lokuqoqa imininingwane yokuxhumana yethimba lokuthengisa, kanye nemibuzo ethile efanelekayo ukuthola umuzwa wesabelomali samathemba nomuzwa wokuphuthuma.
Ithimba lokumaketha eCompendium liyamangalisa ekusebenziseni ngokuphelele ithuluzi labo. Ngiyazi ngokweqiniso ukuthi i-Compendium iqoqa ukuhola okuningi ngemiphumela yokusesha nangebhulogi yabo kunanoma yimuphi omunye umthombo. Akungabazeki ukuthi kungenxa yomsebenzi omuhle abawenzayo lapho behlola, bephinda behlola futhi besebenzisa indlela yabo yokuguqula. Wenze kahle!
Ukudalulwa Okugcwele… Nginamasheya futhi ngisize ukuqala i-Compendium Blogware (ngiyabonga ukuthi abahambanga nawo uphawu lwami!)
Tags: ukubhuloga kwebhizinisiamamethrikhi wokuguqulaukubhuloga ezinkampani